Maalik Jones oo ah Mareykan lagu qabtay Somalia isaga oo ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa lagu maxkamadeyn doonaa New York.
Maxkamad Mareykan ah ayaa 31 jir Mareykan ah kusoo rogtay dacwado ku saabsan inuu taageero siiyey kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Xeer ilaaliye Mareykan ah oo lagu magacaabo Preet Bharara ayaa bayaan ku sheegay isniintii (1/11/2016) in Maalik Alim Jones oo degan gobolka Maryland uu u safray Soomaaliya, si uu tababar uga helo Al-Shabaab, kadibna uu hubka qaatay sii uu uga dhinac dagaalamo.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in Jones uu ka safray New York, oo uu tagay Kenya, isaga oo kusii hakaday Morocco iyo Imaaraadka Carabta, kadibna dhinaca dhulka ugu safray Soomaaliya, halkaasi oo lagu siiyey tababar ah sidii uu dadka u dili lahaa una bur burin lahaa bulshada.
Saraakiiisha Mareykanka waxa ay sheegeen in tuhmanahan uu qaatay tababar hubka sida daran dooriga ah u dhaca iyo gantaalada garabka laga tuuro.
Mas’uuliyiinta waxa ay sidoo kale sheegayaan in Jones uu dagaalyahannada kale ee Al-Shabaab kala soo muuqday labadii video ee ugu dambeeyey ee kooxdaas ay isku dayeysay inay kusoo jiidato dad u dagaalama.
Weli waqti looma qaban dhageysiga dacwadda maxkamadeynta ka horeysa ee Jones, hase yeeshee Waaxda Cadaaladda Mareykanka waxa ay sheegtay in kiiskan lagu maxkamadeyn doono degmada koonfureed ee New York.
Bayaan kasoo baxay mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Jones la qabtay isaga oo isku dayaya inuu u safro dalka Yemen, halkaasi oo xulufada Sacudiga uu hoggaamiyo ee Sunniga ay kula dagaalamayaan Shiicada Iran ay taageereyso.
Waxaa qabtay ciidamada dowladda Soomaaliya, 7-dii bishii December ee 2015, isaga oo doonaya inuu Baraawe ka baxo. Bishii tagtay ayaa loo duuliyey Mareykanka, waxaana uu 19-kii December kasoo hormuquday maxkamad ku taalla magaalada Manhattan ee New York.
Abwaan Cali Sugulle Cigaal Oo Geeriyooday
Shirka Warbaahinta Soomaaliya Oo Furmay